Ciidamada maamulka Somaliland iyo Jabhadda Kornayl Caare oo markii ugu horeysay isku dhac dhexmaray - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada maamulka Somaliland iyo Jabhadda Kornayl Caare oo markii ugu horeysay isku dhac dhexmaray
September 23, 2018 Puntland Mirror Somalia, Somaliland 0
Kornayl Siciid Cawil Jaamac iyo jabhadiisa ayaa fadhi u ah deegaano kuyaala Puntland. [Sawir Hore]
Ceerigaabo-(Puntland Mirror) Ciidamada maamulka Somaliland ayaa isku dhac ku dhexmaray jabhada uu hoggaamiyo Kornayl Siciid Cawil Jaamac oo loo yaqaan Caare deegaan kuyaala gobolka Sanaag, sida ay sheegeen dadka deegaanku.
Isku dhaca ayaa ka dhacay Sabtidii deegaanka Hal-dhaadan ee gobolka Sanaag, sida ay wararku sheegeen.
Ma cadda haddii uu jiro khasaare ka dhashay isku dhaca oo soo gaaray labada dhinac.
Waa markii ugu horeysay oo isku dhac dhexmaro labada dhinac tan iyo markii jabhadu ay hubka qaadatay bartamihii sanadkan ee 2018-ka.
Puntland ayaa saldhig siisay jabhada uu hoggaamiyo Kornayl Caare oo horey uga mid ahaa ciidamada Somaliland, isaga oo sheegay in Somaliland uu uga soo tagay cadaalad daro iyo dulmi ka dhan ah beeshiisa, oo kamid ah beelaha ugu waa-weyn ee Somaliland.
July 27, 2019 Dagaal dhexmaray jabhada uu hoggaamiyo Kornayl Caare iyo ciidamada maamulka Somaliland
Somalia is resuming talks with the unrecognized government of breakaway region Somaliland, according to Djibouti President Ismail Omar Guelleh. A delegation including Somali President Mohamed Abdullahi and Somaliland leader Muse Bihi Abdi, as well as [...]
Ugu yaraan 48 qof oo ku naf waayay qarax gaari oo ka dhacay caasimada Ciraaq ee Baqdaad
Baqdaad-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 48 sideed qof ayaa lagu dilay qarax gaari oo ka dhacay caasimada dalka Ciraaq ee Baqdaad maanta oo Khamiis ah, sida ay sheegayaan ilo-wareedyo caafimaad iyo kuwa amaan. Gaari laga soo [...]